HS:- Kedib kulamo badan iyo wadatashi dhawaanahan u socday siyaasiyiin, aqoonyahano, waxgarad kaasi oo ay ujeedadiisu tahay sidii hal maamul loogu sameyn lahaa goboalda Banaadir iyo Sh/dhexe si loo helo maamul goboleed la magac baxay Banaadir State.
Inkasta oo ay horey bulshada badankeed iskgu raaceen in aan marnab ala kala jarin gobolka Banaadi riyo Sh/dhexe hadane warar xaqiiqda u dhaw ayaa sheegaya in ay dhawaan ka kal adhici doonaan shirar bilaaw ah gudah awadanka iyo dalka dibadiisa kaasi oo ay hormood ka yahiin siyaasiyiin iyo waxgarad can ka ah bulshada ka soo jeeda deegaanadaas.
Inkasta oo aanu dooneyn in aanu ka hordhacno arimo badan hadane wararkii ugu danbeeyey ee aanu ka heleyno ilo lagu kalsoonaan karo ayaa sheegaya in ay isku raaceen beelaha Mududood iyo qowmiyada Banaadiriga oo ah labada beelood ee ugu badan deegaanada lagu wado in loo dhiso maalmul goboleedka Banaadir State sidii maamulkas loo yagleeli lahaa.
Waxgaradkaan, aqoonyahanadaan iyo siyaasiyiinta howshaan abaabulkeeda wada ayaa aad u soo dhaweeyey amaba bogaadiyey shirarka bilaawga wanaagsan ah ee ka socda magaalooyinka Cadaado iyo Belet Weyne kuwaasi oo si habsami leh uga socda halkaas dadkuna ay weli wadaan wadatashigii ugu danbeeyey ee ay maamul ku yimid rabitaankooda ku sameysan lahaayeen si ay mustaqbalka u doortaan shaqsi nadiif ah oo bulsahda Soomaaliyeed iyo kuwa deegaankaas isku xiri kara.
Hadaba waxaan dhawaan si joogto ah u soo gudbin doonaa dhamaan shirarka ay mustaqbalkooda uga tashanayaan bulshoweynta ku nool gobolada dhexe, Hiiraan iyo midka hada lagu wado inuu ka furmo dhawaan caasimada Soomaaliya ee loogu gogol xaarayo Dhismaha maamul goboleedka Banaadir State.
· admin on April 18 2015 23:42:22 · 0 Comments · 1491 Reads ·
14,614,649 unique visits